AppDrawer, miditra amin'ny fampiharana toy ny amin'ny Android amin'ny iOS | Vaovao IPhone
Ny iray amin'ireo antony hanaovana ny jailbreak dia ny ahafahana manamboatra ny sarin'ny iPhone, iPod na iPad antsika. Ao anatin'ireo safidy manokana dia misy ihany koa ny fanovana azo atao izay mahatonga ny iOS hitovy endrika Android, zavatra izay toa tsy dia tsara loatra amiko, saingy azoko tsara fa misy olona izay maniry antsipirihany sasany momba ny rafitra fiasan'ny robot maitso. Iray amin'ireo antsipiriany ireo ny fampirimana izay tahirizina ireo rindranasao rehetra y AppDrawer Manolotra antsika izany mety ho an'ny fitaovan'ny iOS jailbroken.
Araka ny hitanao amin'ity pikantsary manaraka ity, AppDrawer anay dia hanampy sary masina amin'ny efijery an-trano misy sary mitovy amin'ny an'ny fitaovana Android maro. Ny tsara indrindra dia apetaho ao amin'ny Dock mba ho eo akaikiny akaiky foana. Raha vantany vao manokatra azy io isika dia afaka miditra amin'ireo rindranasa rehetra. Voalamina araka ny abidia izy ireo, zavatra tiako ampiana an'i Apple, farafaharatsiny azo atao, na amin'ny iOS na OS X.
Rehefa manokatra azy isika dia manana, ho fanampin'ny tabilao fampiharana, a kiheba ankafizinao. Izy io dia mora ampiasaina mba hidirana haingana amin'ireo rindranasa ampiasainay indrindra, saingy tsy tafiditra ao amin'ny Dock ireo. Raha mampiditra rindranasa sasany amin'ireo ankafizinay izahay, zavatra azontsika atao amin'ny fisintomana tweak, dia ho roa paoma miala amin'ireo rindranasa ireo izahay.
Ao amin'ny fikirana AppDrawer koa afaka manafina ireo rindranasa roa isika ao anatin'ny fampirimana AppDrawer ho toy ny rindranasa efijery mahazatra ao an-trano, izay ilaina raha manana rindranasa izay tsy tiana ho hita isika. Ohatra, amiko (maso, amiko) dia toa tsy misy dikany ny fananana Activator ao amin'ny Springboard raha toa ka manana izany ao anaty fikirana koa aho. Azo antoka fa manana rindranasa tsy tianao ho hitanao amin'ny efijery an-tranonao ianao na ho hitan'ny olon-kafa fa napetrakao izy io.
mifanentana: iOS 8+
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Jailbreak » Cydia » AppDrawer, miditra amin'ny fampiharana toy ny amin'ny Android amin'ny iOS
Tulas Moreno (@tulasmoreno) dia hoy izy:
Ny fananana iPhone ary maniry azy ho toy ny android dia toy ny fanananao Ferrari ary maniry azy ho toy ny Nissan.
Mamaly an'i Tulas Moreno (@tulasmoreno)
Instagram dia hanampy fanohanan'ny mpampiasa marobe